Rose of Sharon: January 2011
chúc mừng năm mới ဆိုတာ ဗီယက်နမ်စကားပါ (ကျွတ်မွန်နမ်မွီ) လို့အသံထွက်ပြီး အဓိပ္ပါယ်က Happy New Year ပါ... တရုတ်နှစ်သစ်ကူးချိန်မှာဘဲ ဗီယက်နမ်တွေလဲ နှစ်သစ်ကူးကြတယ်... Tết လို့ခေါ်တဲ့ ဗီယက်နမ်နှစ်သစ်ကူးရာသီမှာ ရုံးတွေဆိုင်တွေပိတ်ကြတယ်... ကျမတို့မြန်မာတွေ သင်္ကြန်ချိန်နီးရင် အစားအသောက်တွေစုဆောင်းကြသလို သူတို့တွေလဲ Tết မတိုင်ခင် တစ်ပတ်နှစ်ပတ်လောက်ကတည်းက အစားအသောက်တွေကြိုဝယ်ထားကြလို့ အခုတလော စူပါမားကတ်တွေမှာ ကြိတ်ကြိတ်တိုးနေ ကြတာ ပိုက်ဆံရှင်းရင်လဲ ကောင်တာမှာ တန်းစီစောင့်ရတာ လူတန်းကအရှည်ကြီးမို့ အကြာကြီးပါဘဲ... အဲဒီအချိန်မှာ သူတို့တွေ အလုပ်မလုပ်ကြဘူး... သူတို့အဆိုအရ လယ်သမားလဲနား လယ်ယာမြေလဲနားရတယ်တဲ့... အဲဒီအချိန်အတွင်းမှာ ဝတ်ကောင်းစားလှဝတ်ကြတယ်... စိတ်ကောင်းထားကြရတယ်... အပြုအမူအနေအထိုင်တွေ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ကြိုးစားကြတယ်... နှစ်သစ်မှာကောင်းမှ တစ်နှစ်လုံးကောင်းမယ်ပေါ့... သူတို့နှစ်သစ်ကူးဟာ အပြင်ထွက်လည်ကြတာမဟုတ်ဘဲ မိသားစုတွေ ပြန်လည်ဆုံစည်းကြပြီး အတူတူချက်ပြုတ်စားကြလေ့ ရှိတယ်... အဲလိုအချိန်မှာ ရထားလတ်မှတ် အဝေးပြေးကားလတ်မှတ်တွေ ဝယ်မရတော့ဘူး... အကုန်လုံး fullly booked ဘဲ... ကျမတောင် ပင်လယ်ကမ်းခြေဘက်သွားဘို့ကို တစ်လစောပြီး ဘွတ်ကင်တင်ထားရတယ်.... ဒါတောင်မှီရုံလေးရယ်... အားနေတုန်းရိုက်ထားတဲ့ ပုံလေးတွေတင်လိုက်ပါတယ်... မောင်နှမများအားလုံးကို chúc mừng năm mới လို့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်နော်...
Posted by rose of sharon at 7:55 AM No comments: Links to this post
နှစ်သစ်ရောက်တိုင်း အကောင်းဆုံးတွေ ဖြစ်လာဘို့ မျှော်လင့်သလို ကိုယ့်ဘက်ကလဲ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းမှာ အကောင်းဆုံး စိတ်ထားနဲ့ နေထိုင်အသက်ရှင်ဘို့ ဆင်ခြင်မိတယ်....
အဲလိုအကောင်းဆုံးအသက်ရှင်နေထိုင်ဘို့ ဖေဖေ့ဆီက ပုံသက်သေတွေ စံနမူနာယူလေ့ရှိတယ်... ဒီနှစ်ဖေဖေမရှိတော့တဲ့အခါ ဖေဖေ အသက်ရှင်တုန်းက ကျမအနှစ်သက်ဆုံး ဖေဖေ့ဆီက ပုံသက်သေအတိုင်း နေထိုင်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်မိတယ်....
ဖေဖေဟာ ကျမတို့ကို ဖြောင့်မှန်စွာ အသက်ရှင်နေထိုင်ဖို့ သွန်သင်ဆုံးမခဲ့တဲ့ အပြင် သူသင်တဲ့အတိုင်း သူကိုယ်တိုင်ကျင့်ကြံ ခဲ့သူလည်းဖြစ်တယ်....
ကျမအနှစ်သက်ဆုံးဖေဖေ့ဆီက ပုံသက်သေက သူများကိုယ့်အပ်ါမကောင်းကြံပါစေ ကိုယ့်ဘက်က သူ့ကို ဘာမှမတုန့်ပြန်ဘဲ ကိုယ့်ဟာကိုယ် အကောင်းဆုံးစိတ်ထားနဲ့ နေတတ်ဘို့ပါဘဲ...
ကျမ အရမ်းငယ်တုန်းက အဖြစ်အပျက်လေးပေမဲ့ အခုထိ မှတ်မိနေသေးတဲ့ ဖြစ်ရပ်တစ်ခုပေါ့.... ကျမတို့ငယ်ငယ်က ဖေဖေဟာ အစိုးရဝန်ထမ်းမို့ ဝန်ထမ်းအိမ်ယာမှာ နေကြတယ်.... သစ်သားအိမ်လေးတွေကို ဖြတ်ပြီးရင် ခြောက်ခန်းဘဲရှိတဲ့ တိုက်အိမ်လေးမှာ ကျမတို့မိသားစုနေတယ်.... ကျမတို့ အိမ်ဘေးမှာ နတ်မျိုးစုံကိုးကွယ်တဲ့ နတ်ကတော် တစ်ယောက်နေတယ်...သူ့အမျိုးသားကဖေဖေနဲ့ အလုပ်တူတယ်....သူတို့မှာလည်း ခလေးတွေရှိတော့ ကျမတို့တွေ ကစားဖော် အိမ်နီးချင်းတွေ ဖြစ်ခဲ့တယ်... ဒါပေမဲ့ ဘာလို့မှန်းမသိ အဲဒီနတ်ကတော် အမျိုးသမီးဟာ ကျမတို့ကို ကြည့်မရဘူး... ကျမအမေကို မနာလိုဘူး... ကျမက ငယ်သေးတော့ သူဘယ်လောက်အထိ ကျမတို့ မိသားစုကို ပုတ်ခက်စော်ကားခဲ့တယ် အသေးစိတ် မမှတ်မိတော့ဘူး.... နောက်ဆုံးဇာတ်ရှိန်မြင့်လာမှ ခလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ သတိထားမိသွားတာ... ကျမသိတဲ့ အချိန် ဒီအမျိုးသမီးရဲ့ မနာလိုစိတ်ဟာ အထွတ်အထိပ်ကို ရောက်နေပြီ... နာမည်တပ်ပြီးအော်ဆဲတဲ့အထိကို ဆိုးလာတယ်... ကျမမေမေက သိပ်အနေအေးတယ်... တချို့မိန်းမတွေလို အိမ်မလည်တတ်တဲ့မေမေဟာ ရန်ဖြစ်ရတာလဲ ရှက်တတ်သူဖြစ်တယ်... မေမေစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးငိုတာဘဲ ကျမမှတ်မိတယ်... သူ့ကိုဘာမှ မတုန့်ပြန်လေ သူ့ရဲ့ဒေါသစိတ်က ပြင်းထန်လေဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံး ကျမတို့တအိမ်လုံးကို အောက်လမ်းပညာနဲ့ ဖျက်ဆီးမယ် ဆိုပြီး မန်းထားတယ်ဆိုလား အဲဒီစာရွက်တွေကို မီးရှို့ပြီး ကျမတို့ ခြံထဲကို ပစ်ချတယ်... သူ့နတ်စင်ပေါ်က ဘာလုပ်ထားတယ်ဆိုလဲမသိ ရေတွေ သွန်ချတယ်.... ကျမမှတ်မိတာ အဲလိုတွေလုပ်နေတာ ညဘက်ကြီး.... ကျမတို့ခလေးတွေကကြောက်နေပြီ... ဒီအချိန်မှာ ဖေဖေက တည်ငြိမ်စွာဘဲ မိသားစုအားလုံးကို အတူတူဝိုင်းထိုင်ခိုင်းပြီး ဘုရားဆုတောင်းတယ်... ဘေးအန္တရယ်က ဘုရားရှင် ကွယ်ကာပေးဘို့ ဖေဖေနဲ့ မေမေ တလှည့်စီ ဆုတောင်းကြတယ်... ပြီးတော့ ဓမ္မသီချင်းတွေဆိုတယ်... ဆုတောင်းလိုက် ဓမ္မသီချင်းတွေဆိုလိုက်နဲ့ ကျမတို့ ခလေးတွေရှေ့ဆင့်နောက်ဆင့် အိပ်ပျော်သွားကြပေမဲ့ ဖေဖေနဲ့ မေမေက တစ်ညလုံးမအိပ်ဘဲ ဆက်ဆုတောင်းနေခဲ့ ကြတယ်... နောက်နေ့မနက် ကျမတို့ အိပ်ယာနိုးတဲ့ အချိန်မှာ ကျမတို့ အိမ်နားဝန်းကျင်မှာ ရုတ်ရုတ်သဲသဲတွေဖြစ်နေတယ်... ဖေဖေနဲ့မေမေကတော့ စိတ်မကောင်းပုံပေါ်ပေမဲ့ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ပါဘဲ... ရပ်ကွက်ထဲက တစ်ချို့လူတွေကတော့ ကျမ အဖေနဲ့အမေက အဲဒီအမျိူးသမီးကို သည်းမခံနိုင်တော့လို့ ပြုစားလိုက်တယ်လို့ ပြောကြတယ်... တကယ်တော့ဖေဖေနဲ့မေမေက ဘေးအန္တရယ်က ကွယ်ကာဘို့ဘဲ ဆုတောင်းခဲ့တာပါ... စိတ်ရောဂါအထူးကုဆေးရုံကိုပို့ရလောက်အောင် ညတွင်းချင်းရူးသွားရတာက သူ့အတ္တနဲ့သူ ဖြစ်တာလို့ ကျမယူဆပါတယ်...
ကျမဖေဖေ့ဆီက သင်ယူမိတာက ဘယ်သူကိုယ့်အပေါ်ဘယ်လိုဘဲ မကောင်းကြံပါစေ... ကိုယ့်ဘက်က မတုန့်ပြန်ဘဲ ကိုယ့်ဟာကိုယ် မှန်မှန်နေဘို့ပါဘဲ... ကိုယ်ကောင်းရင် ခေါင်းမရွေ့ဘူးဆိုတာ ကျမလက်ခံပါတယ်.... အဲဒီအတိုင်းလဲ ကျင့်သုံးပါတယ်... ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကိုယ့်အပေါ်မကောင်းကြံမှု၊ ကိုယ့်ကွယ်ရာမှာ ကိုယ့်ကို မကောင်းဘူးရယ်လို့ လုပ်ကြံပြောခံရတာတွေ ကြုံခဲ့ဘူးပါတယ်... ကျမဖေဖေ့လောက်တော့ တည်ငြိမ်စွာ မနေနိုင်ခဲ့ပါဘူး... ဒါပေမဲ့ ဘယ်တော့မှ မတုန့်ပြန်ဘဲ ဖေဖေ့လိုတည်ငြိမ်ခြင်းနဲ့ ဒါတွေကို ကျော်ဖြတ်နိုင်ဘို့ ဆုတောင်းခဲ့ပါတယ်... အမှန်တရားက အချိန်တန်ရင်ပေါ်လာမြဲပါဘဲ... ဒါပေမဲ့ အဲဒီ အမှန်တရားပေါ်မလာသေးခင်ကာလမှာ ကိုယ့်အပေါ်မကောင်းသူတွေကို ဘာမှမဖြစ်သလို တည်ငြိမ်စွာဆက်ဆံနိုင်ဘို့ ဖေဖေ့ဆီက ပုံသက်သေလက်ဆောင်တစ်ခု ရလိုက်တာ ကျမအတွက် အရမ်းကိုတန်ဘိုးရှိပါတယ်...
ဒီနှစ်မှာလဲ မနှစ်ကလို ကိုယ့်ဘက်ကနေဘဲ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ကောင်းအောင်နေထိုင်ဘို့ သူများကိုယ့်အပေါ်မကောင်းတာတွေကို ဥပေက္ခာပြုနိုင်ဘို့ ဘုရားရှင်ထံမှခွန်အားယူရင်း နှစ်သစ်ကိုလျှောက်လှမ်းပါဦးမည်...
Posted by rose of sharon at 6:04 PM No comments: Links to this post
Posted by rose of sharon at 1:36 PM 1 comment: Links to this post
ံHAPPY NEW YEAR 2011
၂၀၁၀နဲ့လမ်းခွဲလိုက်ရတာ အရမ်းပျော်တယ်...ကိုယ့်အတွက် ကောင်းခြင်းတွေနည်းပြီး မကောင်းခြင်းတွေများခဲ့တဲ့ ဒီ၂၀၁၀ဟာ တကယ်ကိုမလွမ်းလောက်ပါဘူး....
ဒီနှစ် နှစ်သစ်ကူးကို အခါတိုင်းလို အိမ်မှာမနေဘဲ ခလေးတွေနဲ့ ပင်လယ်ကမ်းခြေကို ခရီးထွက်ပြီး နှစ်သစ်ကိုကြိုဆိုခဲ့တယ်... ၂၀၁၁ ဟာ ကောင်းခြင်းတွေသယ်ဆောင်လာမယ်လို့ မျှော်လင့်ရင်းနဲ့....
ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ နှစ်သစ်ကူးညတွေဆို ဘုရားကျောင်းမှာ ဘုရားရှိခိုးပြီး ည၁၂နာရီတိတိမှာ Happy New Year လို့အော်ကြတယ်... အရွယ်ရောက်လာတော့ အိမ်ကလူတွေနဲ့ ဘုရားကျောင်းသွားပေမဲ့ ဘုရားကျောင်းရောက်ပြီးမှ တိတ်တိတ်လေးခိုးထွက်ပြီး အပြင်မှာကြိုစောင့်နေတဲ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တံတားဖြူဘက်သွားကြတယ်... နောက်မှ အဆူခံလိုက်တယ်....
အခုတော့ခလေးတွေနဲ့ပင်လယ်ကမ်းခြေမှာ နှစ်သစ်ကူးဖို့ စီစဉ်ထားပေမဲ့ ကျေးဇူးရှင်တွေက မျောက်ရှုံးအောင် ဆော့ထားကြတော့ ၁၂နာရီထိနေဖို့မပြောနဲ့ ၉နာရီနဲ့တင်အိပ်သွားကြလို့ ၁၂နာရီထိုးချိန်မှာ ကိုယ်တစ်ယောက်ထဲရယ်.... ဒါနဲ့ဘဲ Happy New Year မအော်တော့ဘဲ ဖုန်းနဲ့ဘဲ သူငယ်ချင်းတွေဆီကို message လိုက် ပို့တော့တယ်... HAPPY NEW YEAR 2011 လို့.... ဒီဘလော့လေးကို လာလည်ကြတဲ့ မိတ်ဆွေများလိုလဲ နှစ်သစ်နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်.... HAPPY NEW YEAR 2011
Posted by rose of sharon at 9:45 PM No comments: Links to this post